Izizathu Ezinhlanu Eziphezulu Zezinhlobo Zomshikashika Wokulinganisa I-ROI Yomphakathi | Martech Zone
Izizathu Ezinhlanu Eziphezulu Zezinhlobo Zomshikashika Wokulinganisa I-ROI Yomphakathi
NgoLwesihlanu, ngoJuni 29, i-2018 Douglas Karr
Sabelane nge-infographic emangalisayo echaza ukuthi ibhizinisi lingakwazi kanjani linganisa ukubuya kwabo kwezokuxhumana ekutshalweni kwemali. Ukulinganisa i-ROI emithonjeni yezokuxhumana akunazo izinselelo zayo, noma kunjalo. Eqinisweni, ukungabi bikho kwamandla wokulinganisa umthelela wezokuxhumana - ngeshwa - kuholele ekutheni izinkampani eziningi zilahle ngokuphelele ezokuxhumana.
Ingabe Ukuthengisa Kwakho Komphakathi Kuyasebenza?
Ukukala ukubuya kokutshalwa kwemali (i-ROI) kwemizamo yezokuxhumana kube yisihloko esiphikisayo nabakhangisi. Amabhizinisi amaningi kunanini ngaphambili anikela ngenani elikhulayo lezinsizakusebenza ekumaketheni imithombo yezokuxhumana, kepha abaningi namanje abakwazi ukunquma ukuthi leyo mizamo iphumelele yini. Nayi eminye yemikhuba ephezulu nezinselelo ezibhekene nazo ekulinganiseni i-ROI yomphakathi. Nge- MDG
Izizathu Eziyisihlanu Eziphakeme Zezinhlobo Zokulwa Nenani Le-ROI Yomphakathi:
Abakwazi ukubopha imithombo yezokuxhumana emiphumeleni yebhizinisi - Yize kulandelwa amamethrikhi wokuzibandakanya, ama-brand awakwazi ukubona ukuthi okuthunyelwe komphakathi kanye nokwabelana kuthinta kanjani imali iyonke.
Bantula ubuchwepheshe be-analytics nezinsizakusebenza - Abakhangisi abaningi basha kumathuluzi ezokuxhumana nawokuhlaziya. Kungaba khona ijika lokufunda njengoba abathengisi bejwayela amapulatifomu amasha bese beqala ukwaba izinsiza zokulinganisa i-ROI yomphakathi.
Basebenzisa amathuluzi wokulinganisa anganele nezingxenyekazi - Ngenkathi kunamathuluzi amaningi wokulandela umkhondo wezokuxhumana atholakalayo namuhla, akuwona wonke amapulatifomu azohlinzeka ngabadayisi bemininingwane.
Basebenzisa izindlela zokuhlaziya ezingahambelani - Abanye abathengisi abakwazi ukuthola isithombe esicacile sempumelelo yezikhala zabo ngenxa yokubika okungahambelani.
Bathembele kudatha empofu noma engathembekile -Ikhwalithi yemininingwane yezenhlalo etholakele nayo ibalulekile. Isibonelo, izinkundla zokuxhumana zigcwele ama-akhawunti mbumbulu nalawo ayimpinda. Umsebenzi kusuka kulawa ma-akhawunti kwesinye isikhathi ungathinta ukunemba kwedatha yakho.
Ngenkathi lokhu kukhomba kubuchwepheshe kancane, ngingasho ukuthi mhlawumbe abathengisi abaningi abamane basebenzise imithombo yezokuxhumana ngalokho okuhle kakhulu ngakho. Isibonelo, ucwaningo lokuma komkhiqizo nokumaketha. Ungacwaninga futhi uthole ulwazi oluthe xaxa mayelana nekhasimende lakho elihle, izithameli ezihlosiwe, i-geography eqondisiwe, izisusa zabo, izikhalazo zabo, izinselelo zabo, nokuningi. Usebenzisa leyo datha, ungalungiselela isu lakho kanye nemikhiqizo yakho oyinikezayo ukuze uzihlukanise kangcono futhi uzimakethe. Ukulinganisa kanjani lokho? Kunzima ukudweba umugqa onamachashazi, kepha siyazi ukuthi kuwufanele.
Esinye isibonelo esingathandwa kangako. Ikhasimende lingena enkingeni ngemikhiqizo noma izinsizakalo zakho bese lihlanganyela ukukhungatheka kwabo ngemithombo yezokuxhumana. Lokhu kunikeza inkundla yomphakathi yokubonisa ukuthi uwaxhasa kanjani amakhasimende akho. Ezinye izinkampani zize zilubeke phambili lolu daba ngokuya ngethonya lekhasimende… kepha sibheke njengoba abantu abanethonya kakhulu bephakamisa futhi bekhulisa inkinga. Manje lelo khasimende elikhungathekile, umgqugquzeli, nabo bonke abalandeli babo nabalandeli babukele.
Ngokuya ngokuthi ushaye i-homerun noma ushaye isiteleka, yimuphi umthelela ongaba khona ebhizinisini lakho? Kunzima impela ukukusho lokho. Njengoba i-MDG Advertising isho ngokukhishwa kwe-infographic yabo yakamuva, i- I-ROI Yezokuxhumana:
Ukuthola indlela eyiyo kuzothatha isikhathi nomzamo, kepha ukwazi ukuthi ungalandelela kanjani umthelela wezokuxhumana emphakathini wakho kuzokwenza ukuthi utshalomali lukufanele.
Nayi i-infographic ephelele ekhombisa ukuthi amabhizinisi adonsa kanzima kanjani, akwazi ukulinganisa, lapho abathengisi babona khona ithuba, nezinselelo ezihilelekile.
I-Taskade: Umphathi Womsebenzi Wesikhathi Sangempela nge-Video and Collaborative Editing
Ukumaketha Kwamaselula: Bheka Ithuba Langempela Ngalezi Zibonelo